Mbido » Freebies » Kpee ude nke ihe omuma nke udere
FitFreeze ice cream na-eme ka afọ ju gị, nwee ume na afọ ojuju. Na mgbakwunye na ịbụ nnukwu protein, FitFreeze na-ejikwa eriri na-enweghị gluten. Ije nri Fitfreeze ice cream 7 dum gram nke eriri nke ji okpukpu asatọ karịa iko inine! Achịcha a dị obere karịa shuga karịa iko ice cream gị. FitFreeze nwere ihe na-atọ ụtọ na-enweghị ihe ọ bụla na-emeso ma ezinụlọ gị niile ga-ahụ n'anya! Nwere mmasi na ụdị nnweta FitFreeze gị? Pịa ebe a iji nweta nke gị taa